पानी - प्रकृति को एक धन। यो सबै-खपत तत्व को कवि र विद्वान देखि कोटेशन हामीलाई अनन्त मान सोच्न बनाउन। आफ्नो घण्टामा हरेक मानिस यसलाई आफ्नो क्यारियर को दिशा मा धेरै परिवर्तन गर्न सक्ने बोध गर्न आउँछ। यसो पानी रहस्यमय शक्ति संग endowed। सानातिना - यो कि जीवन Paramount छ बुझ्न मद्दत गर्छ, र त्यो।
एक व्यक्ति समस्या भित्रबाट भताभुङ्ग हुन्छ, यो अक्सर एकान्त मा बस्न र के भइरहेको छ बुझ्ने पानी बुझाउँछ। यस लेखमा पानी वैज्ञानिकहरूले को रोचक बयान प्रस्तुत। तिनीहरूले यो ठूलो र कहिल्यै परिवर्तन संसारमा आफ्नै सत्य खोज्नेहरूलाई लागि ठूलो चासो हो।
"पानी raison d'etre बन्ने शक्ति छ" (Leonardo Da Vinci)
जीवन अक्सर धन, रहस्यहरुलाई र रहस्य को पूर्ण हामीलाई देखिन्छ। हामी चाहनुहुन्छ, यो छैन हुँदा पनि धेरै कुरा राम्रो छैन जाँदैछन्, व्यक्ति थप प्रयास गर्न रोकिंदैन। पानी फेला पार्न मद्दत गर्छ , मन को शान्ति को डरलाग्दा समस्या को बोझ बन्द फेंक। पानी बारेमा कुनै विवरण एक व्यक्तिले आफ्नो साँचो प्रकृति बुझ्न सक्छ। धेरै हालने र नकारात्मक mentality को कारण राम्ररी नकारात्मक भावना व्यक्त गर्न नसक्नुको छ। यो पानी संकेत गर्न सबै भन्दा राम्रो छ - यो स्तरवृद्धि गर्न मदत गर्नेछ, र तपाईं सुधार शारीरिक अवस्था र भित्री परिवर्तन रूपमा महसुस हुनेछ।
"पानी - अपरिवर्तित आनन्द हामीलाई भरिन्छ जो जीवन नै छ" (सेन्ट-Exupery)
त्यहाँ सायद, एक एकल संसारमा व्यक्ति अनन्त र प्राकृतिक प्रकोप को शक्ति विचार को आनन्द छैन आउनेछ जसले छ। पानी लेखकहरूले बयान जीवन र यसको विभिन्न manifestations को अकाट्य महत्त्व अन्डरस्कोर। सामान्य मा रचनात्मक मान्छे आफूलाई वैकल्पिक manifestations लागि खोज्न, जीवन को अर्थ सोच्न गर्छन। पानी अक्सर आन्तरिक रिसेट को एक राज्य पुग्न, आराम गर्न मद्दत गर्छ।
showering वा स्नान पछि बढ ध्यान। समय को एक निश्चित रकम पानी कुनै पनि शरीर नजिकै हुन भने पनि, मेरो हृदय तुरुन्तै सजिलो हुन्छ। पानी, सबै दुःख लिन सक्ने क्षमता छ सकारात्मक र नयाँ आशा संग प्राण भरिन्छ।
"पानी को प्रकृति बुझ्न - त्यसपछि ब्रह्माण्डको को inexhaustible दुनिया मा प्रवेश" (एम Emoto)
समझदार जीवन र हामीलाई enterprising। पानी को यस कथन के वरिपरि भइरहेको छ देखिन सक्छ बस कसरी ठूलो र अज्ञात देखाउँछ। एक व्यक्ति ब्रह्माण्डको को व्यवस्था बुझ्नुहुन्छ र स्वीकार भने उहाँले आफ्नो भित्री प्रकृति अनुरूप बसोबास। यस्तो व्यक्ति मा सबै धेरै प्रयास बिना रूपमा सजिलै बन्नेछ। तपाईं को, तपाईंलाई थाहा प्रकृति विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, किन अवस्थित, तपाईं मूल्यांकन संग उनको उपहार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्छन्।
तपाईं कहिल्यै पानी साधारण बग्छ बाटो ध्यान? केही मिनेट लागि यो घडी! यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवरोध मार्फत खुलेर बित्दै रूपमा! पानी केही मा रोक्न छैन, तर बिस्तारै र सजिलै कार्य। सबैभन्दा अघुलनशील समस्या भंग गर्न यसको दबाव अन्तर्गत embodiment wildest सपना प्राप्त।
"त्यहाँ पानी संग तुलना गर्न सक्ने केही छ" (लाओ Tzu)
हामी सबै कहिलेकाहीं संतुलन को एक राज्य हासिल गर्न खोज्छन्। पानी को यस कथन सिर्जना र क्षमा को ऊर्जा भरिएको छ। यसलाई कसैले जटिल समस्याको वैकल्पिक समाधान खोज्न खुसी थिए मद्दत गर्छ। पानी अक्सर हामीलाई मदत गर्छ एक पटक दमनकारी अनुभव र समस्या आफूलाई मुक्त गर्न। एक स्नान लिएर व्यक्ति एक सर्प फेरि नयाँ यसको पुरानो छाला, यसरी पुनर्जन्म शेड जस्तै नकारात्मक ऊर्जा संग माझ्छिन्।
पानी पृथ्वीमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य कार्य: भावनात्मक चोटहरू निको पार्न, शारीरिक तथा मानसिक शुद्ध पार्छ। त्यो एक व्यक्ति आवश्यक उद्देश्यका लागि नयाँ, सकारात्मक ऊर्जा भरिन्छ। बल र शक्ति छैन केहि संग तुलना गर्न सकिन्छ। पानी को एक घूंट बिना कुनै जीवित प्राणीहरूको एक दिन बाँच्न सकेन।
"ड्रप टाढा पहनता ढुङ्गा छैन आफ्नो शक्ति, र जोखिम को आवृत्ति छ" (जे ब्रुनो)
सबै जीवित कुराहरू समय परिवर्तन गर्नुहोस्। यसलाई परिवर्तन, मात्र प्रकृति तर पनि मानिस undergoes। एक विचार ढिलो होस् वा पछि, निरन्तर छ भने हामीलाई असर गर्छ, हामी यसलाई हुनेछ। कुनै पनि घटना, सकारात्मक वा नकारात्मक, समय, अब, भयानक डरलाग्दो र विनाशकारी जस्तो देखिन्छ।
पनि पत्थर, स्थायी परिवर्तन को एक संयन्त्र समावेश जो शवर मा व्यक्तिको बारेमा केही भन्न गर्न घटेको को प्रभाव अन्तर्गत परिवर्तन गर्न सक्षम छ।
"म भारतीय समुद्र, नीलो, यो मा नीलो लहर twists देखे" (K. Balmont)
हामी वन्यजन्तु अभिन्न भाग हो जो पानी प्रशंसा बारेमा कुरा गर्दै छन्। Konstantin Balmont आध्यात्मिक र नैतिक परिवर्तन को संभावना गर्न डाटा रेखाहरू अङ्क। उहाँले यो प्राकृतिक प्रकोप को बडाई को गाउँछन् आफ्नो कविता मा, यो एक उच्च मूल्य दिन्छ। पानी को कवि देखि कोटेशन सामान्यतया रचनात्मक शक्ति र प्रकाश भरिएको छ।
"पानी र समय यसको ठाउँमा सबै राख्दछ" (Alexandre Dumas)
कहिलेकाहीं त्यहाँ मानिसहरूको मन मा एक क्रान्तिको जो देखि, जीवन मा घटनाहरू छन्। प्रायजसो, अबोध्य परिवर्तन संग बैठक मा, मानिस हराएको छ र समय कार्य गर्ने क्षमता हराउछ। पानी धेरै अप्रिय घटनाहरू मार्फत जान मद्दत गर्छ। बस, आफ्नो अनुहार धुनुपर्छ राम्रो महसुस गर्न नुहाउनु।
विगतमा हामीले घटनाहरू देखा पर्यो पुनर्विचार समय, तिनीहरूलाई तिर आफ्नो मनोवृत्ति परिवर्तन। यसरी, पानी सबै जीवित प्राणीहरू लागि जीवन को एक भाग हो। यसको बारेमा बयान आफ्नै जरा फर्कन दिनुभयो।
सारांश: "पर्ल हार" Leskov। कसरी क्रेडिट बस्न?
पुस्तक "फरेनहाइट 451" बाट Aphorisms र कोटेशन
संक्षिप्त सबै भागहरु: "brownie टिप्पणीहरू"
एक गद्य काम के हो
लाज र दोषी बारेमा Instructive हितोपदेश
पुस्तक "धिक्कार बुद्धि देखि" को समीक्षा। "धिक्कार बुद्धि देखि" Griboyedov: समीक्षा
"Yesenin" - sotsiotip पुरुष र महिला: मुख्य विशेषताहरु को विवरण
सम्पत्ति - लेखा एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो
निजनी नोव्गोरोड मा होटल पार्क क्लिभिन: पर्यटकहरु को फोटो र समीक्षा
भाग्य रेखा: मूल्य
क्सीनन: अनुमति वा छैन? म क्सीनन कुहिरो राख्न सक्छ?
Ani Lorak पतिले आफ्नो परिवारको माया
छाला आस्तीनसँग फैशनेबल र बहुमुखी कोट